Doorasho si guul ah u soo gebagebowday—laakin qiimaheeda waa intee? | OpenGlobalRights
Doorasho si guul ah u soo gebagebowday—laakin qiimaheeda waa intee?
Iyadoo daah-furka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay gacan ka geysaneyso yareynta khatarta colaadaha, martigelinta doorasho kale oo si toos ah ku saleysan takoorid iyada oo aan la helin doorasho guud waa mid aad uga fog xal cuntama.
Inkastoo ay qaadatay 18 bilood ka badan waqtigii loogu tala galay, ayaa hadana waxaa la soo gaba gabeeyay doorashada Soomaaliya ee May 2022 oo loo idmaday dowlad cusub. Natiijadu waxay ku soo beegantay iyadoo ay jiraan caqabado aad u waaweyn: feer lagu tuuray musharixiinta, rasaasta lagu riday baarlamaanka, iyo dagaal beeleedyada qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo laga cabsi qabo in dalka uu mar kale ka dhaco rabshado waaweyn oo u dhexeeya qabaa’il, ayaa haddana waxaa la qaatay nabad-gelyo aan fiicneyn oo ku filan in doorashadu dhammaato.
Cid kasta oo isku dayda in ay ka qayb-qaadato hannaanka lagu dhisayo sharciga iyo hay’adaha shaqo ee Soomaaliya, gabagabadani waxa ay muujinaysaa rajo ah in go’aan-qaadayaashu ay hadda dib ugu soo laabtaan jagooyinkooda oo ay qabtaan maamulka uu dalku baahi weyn u qabo. Rajadaan ayaa si gaar ah muhiim ugu ah meel ka baxsan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Doorashada ayaa noqotay mid carqalad ku ah maamul goboleedyada dalka iyadoo mas’uuliyiinta deegaanka ay si lama filaan ah u galiyeen olole iyo siyaasad, iyagoo inta badan u safri jiray magaalada Muqdisho muddo dheer si ay uga qeyb qaataan shirarka, isla markaana ay meesha ka baxdo mad madow. go'aan qaadashada.
Warka ugu dambeeya ee lagu farxo ayaa ah in aakhirkii uusan madaxweynaha xilka sii haynin si awood ah, inkastoo uu sameeyay tallaabooyin dhowr ah oo uu ku sheegay inuu isku dayi doono. Tani waxay astaan ​​u tahay in Soomaaliya ay mar kale ku guulaysatey in si nabad ah xukunka uu ku wareejiyo madaxweyne xilka haya, taasoo mustaqbalka wanaagsan u soo bixi doonta.
Waddada soo socota, si kastaba ha ahaatee, ayaa ah mid aad u adag.
Halkii lagu dooran lahaa hal qof iyo hal cod, madaxweynaha cusub waxaa doortay 327 xildhibaan (328 ka mid ah, hal qof oo aan codayn), kuwaas oo ay soo gudbiyeen koox ka kooban ilaa 4,000 oday dhaqameed. La'aanteed sharci caalami ah, awood la'aanta Soomaalida caadiga ah inay la xisaabtamaan madaxda ayaa sii socon doonta. Tani waa sababta qaar badan oo ka mid ah beesha caalamka ay ku adkaysanayaan in ereyga "doorasho" la geliyo calaamado xigasho marka loo eego hababka siyaasadda Soomaaliya.
Inta badan waxaa tix-raac lagu sheegaa caqabadaha ku saabsan doorashada guud ee Soomaaliya, balse, marka laga reebo dowladda dhexe ee Muqdisho, maamul goboleedyada qaar ee ka jira nidaamka federaalka Soomaaliya waxay muujinayaan waxa suuragal ah—tusaale ahaan, Puntland waxay ku guuleysatey doorashooyin deegaan iyo nidaamka hal qof iyo hal cod ee degmooyinka qaar bilihii la soo dhaafay ay sameeyeen.
Iyadoo dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan lahaayeen hal qof iyo hal cod, waxaa laga yaabaa in beelaha laga tirada badan yahay ay ka faa'iideystaan ​​inta badan. Hadda, 4,000 oday beeleed iyo 328 xildhibaan waxaa lagu go'aamiyay kaliya iyadoo lagu salaynayo xisaabin aan rasmi ahayn oo gorgortan laga galay oo loo yaqaan nidaamka 4.5. Sida ku cad, mid kasta oo ka mid ah afarta qabiil ee waaweyn ee Soomaaliya waxay helaysaa sagaal meelood laba meel magacaabis siyaasadeed (oo ay ku jiraan xildhibaano) iyadoo beelaha intiisa kale (dhammaan beelaha laga tirada badan yahay) ay ka faa'iideysanayaan sagaal-meelood meel oo hadhay.
Habkani kuma salaysna tirada dadka—meelaha qaar, xubnaha qabiilka laga tirada badan yahay ayaa laga yaabaa inay si fiican u helaan aqlabiyad. Laakiin, waa natiijada awoodda iyo heerka bulsho. Qaabka 4.5 wuxuu si wax ku ool ah uga dhigan yahay in beelaha laga tirada badan yahay ay u muuqdaan inay yihiin kala bar qiimaha bulshooyinka kale, xoojinta cunsuriyadda, takoorka, iyo ka-eexasgada. In waayo-aragnimadani ay sii socoto in la aqbalo hab-dhaqanka doorashada waxay tani ka dhigaysaa kiis ku salaysan takoor qaab-dhismeed kaas oo meesha ka saaraya fikradda sinnaanta iyo sharafta guud ee dhammaanteed.
Iyadoo maamulo badan ay leeyihiin qoondada loogu talagalay in lagu kordhiyo matalaadda kooxaha la haybsooco (inta badan dumarka, laakiin sidoo kale meelaha qaarkood kooxaha diinta ama firqada), waxa naxdinta leh oo laga yaabo inay gaar u tahay nidaamka (loo malaynayo inuu ku-meel-gaar ah) ee Soomaaliya waa kan ugu badan. kooxaha la haybsooco waxaa lasiiyaa qoondada kala bar ka ah kooxaha mudnaanta leh ee bulshada dhexdeeda. Dhaqan u muuqda inuu ka duulo heshiis kasta oo caalami ah oo ka soo horjeeda takoorka ku salaysan qowmiyadda, laakiin ka jirta Soomaaliya, magac ahaanna ay ugu wacan tahay khatarta sii socota ee ah in dib u soo cusboonaaday colaad baahsan haddii nidaamka hadda jira meesha laga saaro. oo lagu bedelay..
Iyadoo daah-furka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay gacan ka geysaneyso yareynta khatarta colaadaha, lagana yaabo in ay suurtageliso dowladnimo tayo leh, haddana martigelinta doorasho kale oo aan doorasho qof iyo cod ah lahayn, taasoo curyaamisay dowladnimada muddo 18 bilood ah, haddana waxaa lagu go’aamiyay qaab takoor ah oo bareer ah. ku ciyaarista xeeladaha shaqaaleysiinta ee ay adeegsadaan kooxaha xagjirka ah) aad ayay uga fog tahay ku habboonaanta.
Way adag tahay xilligan in la saadaaliyo sida isbeddelku ku iman doono. Sida cad, dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen dhammaan dadka Soomaaliyeed si dhab ah, iyadoo lala kaashanayo taageerada soo cusboonaatay ee beesha caalamka, ayaa weli fure u ah in farriimo cad loo diro madaxda cusub si loo dhiso qaab loo dhan yahay oo wakiil ka ah go'aan-qaadasho siyaasadeed. Tani waa dammaanadda kaliya ee xaqiijinaysa in Soomaaliya ay ka bixi doonto xasillooni-darro daba-dheeraatay oo la gaarsiinayo xaalad ay dhammaan dadka Soomaaliyeed iyadoon loo eegin haybtooda ay ku noolaan karaan nabad iyo wada noolaansho.
Claire Thomas waa agaasime ku xigeenka MRG waxayna hadda Soomaaliya ka fulinaysaa mashaariic, oo ay ku jiraan xisaab-xidhka ka mid noqoshada dadka laga tirada badan yahay ee gargaarka iyo waxqabadyada horumarinta.
Mohamed Eno waa Xiriiriyaha Mashruuca Soomaaliya ee MRG.